बनेपामै कार पार्किङको सेवा ल्याएको छौं | bethanchokkhabar.com
बनेपामै कार पार्किङको सेवा ल्याएको छौं
सोमबार, मंसिर ०३, २०७५ | ६:३९:२६ |
– सुरेश गौतम प्रमुख गौतम पार्किङ सेन्टर
बनेपा पछिल्लो समय आधुनिकतातर्फ अघि बढ्दैछ । बनेपामा साना ठूला सवारीको संख्या बढेसँगै पार्किक प्रमुख समस्याको रुपमा अघि बढ्दैछ । मिनी उपत्यका भएकै कारण अधिकाशं घरहरुमा कार पार्किङ गराउने सक्ने अवस्था छैन । कारका प्रयोगकर्ताहरुले बाँध्य भएर आफ्नो लाखौंको सम्पत्ति असुरक्षित रुपमा सडकमा छाडेर हिड्ने बाँध्यता रहेको बुझेपछि बनेपाका युवा एंव सामाजिक अभियानमा सकृय सुरेश गौतमले सशुल्क कार पार्किङको अवधारणा अघि सारेका छन् ।
बनेपाको केन्द भाग तिनदोवाटोवाट २ सय मिटरभित्र सिनागाल मार्गको राधेराधे मन्दिर भवनसँगै सात रोपनी जग्गामा गौतमले गौतम पार्किङ सेन्टरको स्थापना गरेका छन् । पैसा तिरेर पनि गाडी सुरक्षित राख्न सक्ने ठाँउको अभाव देखेपछि यो काम सुरु गरेको गौतम बताउँछन् । उनले संचालन सुरु गरेको गौतम पार्किङ सेन्टरमा कम्तिमा ५० ओटा गाडी अटाउने सक्ने ठाँउ रहेको छ ।
बनेपामा राजमार्ग आसपासमात्रै कारको वासिङ सेन्टर भएको र दुर्घटनाको जोखिम समेत अत्याधिक भएकाले आफ्नो गौतम कार पार्किङमा वासिङको समेत सुविधा थप गर्ने गौतमले बताए । काभे्रमा पार्किङको अवधारणा नभएको समयमा सुरक्षित रुपमा कार पार्किङ व्यवसाय सुरु गरेका गौतम अब बनेपाका कार तथा साना गाडी प्रयोगकर्ताहरुले सुरक्षित ठाँउमा कार पार्किङ गरेर ढुक्कसँग निदाउने वातावरण सृजना गरेको बताउँछन् । उनै युवा व्यवसायी तथा काभ्रेमा नौलो कामको सुरुवात गर्ने सुरेश गौतमसँग उनको नयाँ व्यवसायमा आधारित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश
० बनेपामा कार पार्किङको व्यवसाय किन सुरु गरेको ?
काभ्रेको बनेपा पछिल्लो समय शहरीकरणहुँदै गएको छ । बनेपामा जग्गाको भाउ पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेको छ । घरजग्गामा धेरै लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । बनेपामा ५० सालदेखि २०७५ सालसम्म बनेका घरहरुमा गाडी पार्किङको अवधारणा विकास भैसकेको थिएन । धेरैले मोटरसाईकल प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो । तर पछिल्लो समय साना गाडीहरुमा बनेपालीको आकर्षण बढेको छ । धेरैले पार्किङको अभावमा गाडी किन्नु भएको छैन । धेरैले रिक्स लिएर सडकमै गाडी पार्किङ गरिरहनु भएको छ । तर हामीले उहाँहरुको गाडीको सुरक्षा दिने सफा गर्ने उदेश्यले बनेपाको तिनदोवाटो चोकवाट पिच सडक दुई सय मिटर तल राधे राधे भवनसँगै सात रोपनी जग्गामा पार्किङ व्यवस्था गरेका छौ । पार्किङमा २४ सैं घन्टा सुरक्षागार्ड तथा सिसी क्यामेराले सुरक्षा दिनेछ ।
बनेपामा कार पार्किङ आवश्यक देखेर हामीले सुरु गरेका छौ । हामीले मासिक रुपमा गाडी राख्ने, पाक्षिक, साप्ताहिक र दैनिक रुपमा गाडी राख्नेलाई फरक फरक दर निर्धारण गरेका छौ । हामीले पार्किङ क्षेत्रका लागि भाडा तिर्नुपर्ने,लाखौं रुपैया लगानी भैसकेको कारणले सहुलियत दरमा गाडी राख्ने व्यवस्था गरेका छौ ।
० बनेपा सानो शहर चल्छ र यो व्यवसाय ?
बनेपा हिजो सानो थियो । घरहरु थोरै थिए । गाडीहरु औलामा गन्न सकिने थिए । तर आज त्यो क्रम रोकिएको छ । बनेपाका हरेक घरमा साना गाडीहरु छन् । तर पार्किङको अभाव छ । त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले पेशा सुरु गरेका हौ ।
सुरुमा हाम्रोे पार्किङ भरिभराउ होला भनेर हामीले यो व्यवसाय संचालन गरेका हैनौ । सबै कुराको बानी पर्नु पर्छ । खुल्ला सडकमा लाखौं रुपैया पर्ने गाडी राख्दा कस्तो जोखिम होला । त्यो गाडी धनीले सोच्न आवश्यक छ । सडकमा छाँडा छोडेका कुकुरदेखि रातको समयमा मापसे गर्नेहरुको सम्म डर हुन्छ । कोरिने, चोरिने, फुटाउने समस्या पार्किङ सेन्टरमा हुँदैन । त्यसको जिम्मेवारी हाम्रो हो । अब प्रश्न छ चल्छ वा चल्दैन । बनेपालीहरु आफ्नो गाडी सुरक्षित राख्ने वा सडकमै त्यसै छाड्ने के गर्न रुचाउनु हुन्छ । त्यसमा निर्भर रहन्छ ।
० कति लगानी गरियो ? आगामी दिनमा के गर्ने योजना छ ?
हामीले सात रोपनी जग्गामा ८० लाख लगानी गरेर बहुपरियोजना संचालन गरिरहेका छौ । अगाडीको सटरहरुमा व्यवसाय संचालित छ । पछाडी हामीले कार पार्किङको सेवा दिएका छौ । केही जग्गा भाडामा आवश्यक रहेको छ भने हामीले गोदाम समेत उपलब्ध गराउने छौ । तर हाम्रो लक्ष्य भनेको बनेपामा एकै छानामुनी दैनिक सयौं गाडी पार्किङ गराउनु हो । आगामी दिनमा थप कामहरु समेत एकै छानामुनी रहेर गर्ने लक्ष्य छ ।
० बनेपामा अझै पार्किङ व्यवसाय संचालन हुँदैन भन्छन् नी ?
२०६० सालतिर बनेपामा मोवाईल पसल चलाउने कुरा गर्दा धेरैले खिसी गर्थे । तरु अहिले बनेपामा एक सयओटाभन्दा धेरै मोवाइल पसलमात्रै छन् । हामीले पनि २०६० सालमा मोवाईल पसल खोलेको भनेर खिसी गरिएको जस्तो हो । हेर्दै जानुस् हाम्रो मात्रै हैन बनेपामा हाम्रो जस्तै पार्किङ गर्ने अरु व्यवसाय पनि थपिनेछन् ।
अहिले आवश्यक छ छैन भन्दा पनि गाडी सुरक्षित राख्ने की नराख्ने भन्ने मुख्य प्रश्न हो । लाखौं रुपैया खर्चेको गाडी वेवारिसे रुपमा सडकमा छाड्ने हो भने यो व्यवसाय टिक्दैन । तर जो गाडी धनी हुन् उनीहरुले काम छिटो गर्नु प¥र्याे । सुरु गरि हालौ भन्नेहरु ३० जनाभन्दा धेरै हुनुहुन्छ । त्यसैले गाडी पार्किङ व्यवसाय चल्दैन भन्नु भ्रम हो ।
० युवा किन व्यवसायी बन्नु पर्छ ?
जो युवा रोजगारीमा छन् । व्यवसायमा आबद्ध छन् । उनीहरु दुव्र्यसनमा आबद्ध छैनन् । तर बिरोजगार युवाहरु कुलतमा छन् । त्यसैले फुर्सद हैन व्यस्त बनाउन युवा व्यवसायी बन्नु पर्छ । म आफै खेतीपाती गर्छु । पशुपालनमा समेत आबद्ध छु । व्यवसाय सुरु गरे । यो सबै म आफूलाई व्यस्त बनाउने काममा लागेको छु ।
० तपाई खेलाडी पनि खेल जीवन त्यागेकै हो ?
हैन मैले हिजो खेल समाजका लागि खेले । अहिले म काभ्रे जिल्ला फुटवल संघको जिल्ला सदस्य तथा शारदादेवी युवा क्लवको कोषाध्यक्षको हैशियतमा खेल जीवनमा छु । भेट्रान खेलाडीको बाहुल्यता रहेको गुड मर्निङ पुटसल टिमको म सकृय सदस्य हुँ ।
मैले खेल जीवन त्यागेको छैन । सुरुवात गरेको छु । खेलाडी नभएर प्रशिक्षक, व्यवस्थापनमा मेरो सकृयता कायमै छ ।
०अन्त्यमा केही भन्नु ?
बनेपा भुगोलको हिसावले सानो भएतापनि आर्थिक हिसावले यो ठूलो शहर हो । पछिल्लो समय साना सवारी साधनको प्रयोगकर्ताहरुको हिसावले बनेपामा संख्या निक्कै बढेको छ । अब तपाईहरुले आफ्नो सवारी साधनहरु सडकमै छाँडेर हिड्ने की व्यवस्थित पार्किङ गर्ने भन्ने हो । हामी तपाईको सवारी साधनलाई सुरक्षित पार्किङ गराउने छौ ।